गुरु सरोज खानको नि’धनमा शोकमा डुव्यो बलिउड, मनिषा पनि बनिन् स्तव्ध ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Bollywood News & Updates/गुरु सरोज खानको नि’धनमा शोकमा डुव्यो बलिउड, मनिषा पनि बनिन् स्तव्ध !
केही समयदेखि चर्चित कलाकारहरु गुमा`इरहेको बलिउडले थप एक जनालाई गुमा`एको छ ।बलिउडमा प्रख्यात कोरियोग्राफर सरोज खानको कार्डियक अरेस्टको कारण मृत्यु भएको छ ।
बलिउड कोरियोग्राफर सरोज खान १७ जुन मुम्बईको बान्द्रा स्थित गुरु नानक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन। सास फेर्न समस्या भएर भर्ना भएकी सरोज खानको शुक्रबार बिहान करीब २ बजे मुत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले पुष्टी गरेका छन् ।
खानलाई गम्भीर मधुमेह सम्बन्धि रोग थियो। उनी ७२ वर्षकी थिइन।उनका परिवारमा उनका पति बी. सोहनलाल, छोरा हमीद खान, छोरीहरू हिना खान र सुक्याना खान रहेका छन्। उनको कोरोनाभाइरसको परीक्षणको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।
उनको निधनमा बलिउड पुरै शोकमा डुबेको छ । उनले हवा हवाइमा माधुरी दिक्षितसहित सबै चर्चित कलाकारलाई नचाइसकेको छिन् । उनको निधनमा बलिउड अभिनेत्री तथा नेपालकी छोरी मनिषा कोइराला पनि शोकमा डुबेको छिन् ।उनले ट्वीटरमा पोष्ट गर्दै आफु दुखी भएको बताएकी हुन् ।